အစဉ်အဆက်ကိုအံ့ဩစရာအေအွန်လိုင်းဂိမ်း? ကောင်းပြီ၊ကံကောင်းတာကသင်တို့အဘို့၊သင်ကတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်အကောင်းဆုံးတစ်ခုမှာပတ်ပတ်လည်အတွက်ဤနယ်ပယ်! ငါအပေါ်ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ကဒီမှာအရှုပ်အရုပ်နှင့်အကြွင်းမဲ့ခွင့်ထူးကိုကြိုဆိုရန်။ ပထမဦးဆုံးဖွင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တံခါး၏ဇူလိုင်လအတွက် ၂၀၂၀ ရှုပ်၊အရုပ်ကအတော်ချာ၏ချမ်းသာချင်သောသူတို့အဘို့ပြီးပြည့်စုံစိတ်ကြိုက်နှင့်ထိန်းချုပ်မှုကျော်တစ်ဦးလိင်ဆပ်ကပ်အတွေ့အကြုံ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အစပိုင်းတွင်စတင်ပရိုဂရမ်ဤမတ်လအတွက်လွှတ်ပေးရန်၏၂၀၁၆၊ဒါကြောင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာများများသွားပြီသို့ဤစီမံကိန်းအရရှိရာအမှတ်ကျနော်တို့ရှာတွေ့။, ကျွန်တော်စိတ်ချယုံကြည်ရှေ့ဆက်မသွားပဲဆက်လက်ဖြစ်သွား-မှအတွက်ဤနယ်ပယ်နှင့်ကောင်လေးတစ်ယောက်၊သင်သာအဘို့တစ်အံ့သြပြီမဟုတ်ခဲ့လျှင်အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့မြင်နေနိုင်၏! ဟိုရှုထောင့်နှင့်ဒြပ်စင်၏အရှုပ်အရုပ်ကပေးခြင်းသင်အကြောင်းအရာအားလုံးကိုသင်လုပ်ချင်တဲ့–လျော့နည်းဘာမှမ။ ဒီအနေထားအတွက်ယာဉ်မောင်းထိုင်ခုံအားလုံး၏သားရေဆန္ဒ၊ဆန္ဒနှင့်လိုလားကြသည်ကြန္ဒုိမ်ားေ။ ဒါကြောင့်အလွယ်ဆုံးအရာအတွက်ကမ္ဘာကြီးကိုအာမခံ၊ဒါပေမဲ့ကျွန်မတို့ရိုက်ပါတယ်ပြီးအင်း–ဒါကအဘို့အကောင်းသတင်းဆိုရင်တစ်ဦးညစ်ညမ်းဂိမ္းဝါသနာပေးချင်သောကြီးစွာသောအချိန်ရှိသည်!, အကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူစိတ်ဝင်စားကျွန်တော်တို့ရဲ့အနည်းငယ်စီမံကိန်းနှင့်အဘယ်သို့အကျိုးခံစားခွင့်အလာဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်? အောက်တွင်ဖတ်ပါ:အပေးမယ်အပြည့်အဝအအရည်ရွှမ်းအသေးစိတ်!
ဟိုအရောင်းတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့ဆက်လက်လိမ့်မည်အကြောင်းကိုပြောဖို့ဒီနေရာမှာအပေါ်အရှုပ်အရုပ်အကြောင်းရိုးရှင်းသောတကယ်တော့သင်ချင်တယ်ဆိုရင်ဝင်ရောက်ဖို့အလွန်ကြီးစွာသောဂိမ်းကစားဖ်ာ္ေျဖေရး၊ဒါဟာတကယ်လွယ်ကူအဲဒီလိုလုပ်ဖို့ကျွန်ုပ်တို့။ သင်အရူးအဆင့်စိတ်ကြိုက်နှင့်ထိန်းချုပ်မှုကျော်ဖြစ်ပျက်အဘယ်အရာကို–ယခုပျော်စရာအတွက်သင်၏လက်ကိုသင်ရခွင့်ပြုထားသောအဆိုပါဂိမ်း၏အိပ်မက်များ၏အားလုံးမှာတခဏရဲ့အကြောင်းကြားစာ။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်အများဆုံးအံ့သြဖွယ်ရှုထောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဂိမ်းရဲ့အဆင့်၏အသေးစိတ်ကျနော်တို့သို့တင်ဇာတ်ကောင်စိတ်ကြိုက်။, မှကြွလာသောအခါသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် sprite၊သင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ထိန်းချုပ်ရန်များစွာကွဲပြားခြားနားသောအရာတို့ကို၊ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်ပခုံးအကျယ်၊အမြင့်၊နှာခေါင်းအနံ၊အသားရောင်၊တက်တူး၊ဆံပင်အရောင်နဲ့တော့။ ကိုစိတ်ကြိုက်ရရှိပင် crazier သင်စတင်သောအခါ fiddling နှင့်အတူမိန်းကလေးများနိုင်မင်း။ မြင်ရှုပ်၊ရုပ်လာနှင့်အတူဒါကြောင့်အများအပြားစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်မှုများကြောင်းမှာပျင်းရ၏ဒဏ်ငွေညှိအရာအားလုံးကို–ဒါဟာရူးမည်သို့များစွာသောရွေးချယ်မှုများရ! ကျနော်တို့အကြောင်းပြောနေတာကွဲပြားခြားနားသောအခြေအမျိုးအစားများလက်သည်းအရောင်တင်အရောင်၊၁၅ ကွဲပြားခြားနားသောနို့အပြင်အဆင်နှင့်စွမ်းရည်ကိုကောက်ဖို့အရိပ်အ butthole သရုပ်ရှိသည်သွား။, ထို့အပြင်၊ရှိပါတယ်မျိုးစုံကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအင်္ဂါရပ်များ၊အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်အသံကဒ်၊သင်ရပါလိမ့်မယ်င္ထူကြိုးအတွက်အချိန်မှာအားလုံး။ လုံလောက်ကြောင်းပြောဖို့ဆိုရင်တစ်ယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုအသည်းအသန်အဆောက်အဦပြည့်စုံကျယ်ပြန့်သည်၊ဒီဂိမ်းအကြောင်းလိမ့်မယ်သင့်ရဲ့စိတ်ကိုမှုတ်။
တက်ကြွစွာ modding စည္း
လျှင်သင်ထွက်စစ်ဆေးကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကဖိုရမ်များ၊သင်သိလာပါလိမ့်မယ်အများကြီးအရေးယူအတွက်အ modding အပိုင်း–ဤအကြောင်းကြောင့်ငါတို့သည်အများကြီးရှိသည်၏ပရိသတ်များရှုပ်ရုပ်ရှိသည်သောသူစိတ်ကြိုက်သူတို့ရဲ့ဂိမ်းဇာတ်ကောင်နည်းလမ်းတွေထဲမှာသင်ဖြစ်စေခြင်းငှါဇူး၏။ အချို့နမူနာကောင်း၏သင်သည်အဘယ်သို့ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်တွင်းများမှာကျော်ကြား sprites နိုင်ဝန်တူ pornstars! အစဉ်အဆက်အဘယ်သို့အံ့ဩဖို့ကဲ့သို့ဖြစ်ရမည့်မင်းကလေးဘဝမိုးတၴအရုပ်၊ဒါကိုတာ Skye၊အတ္ထုပတ္တိနှင့်အခြားကမ္ဘာ့အဆင့်အတန်းအလှအပ? ကောင်းပြီ၊ကျော်နှင့်အတူ ၁၅၀ ချည်မြှုပ်နှံမှကွဲပြားခြားနားငယ်၊သင်သွင်းကုန်နှင့်ကြိုးစားသူတို့အားလုံးကိုထွက်သင်လိုချင်တာအခါတိုင်း!, အ modding ကျွမ်းကျင်သူများကလည်းအယူအပေါ်သို့ကိုယ်ကိုအသစ်ထည့်ရန်နောက်ခံနေရာများ၊positional ရွေးချယ်မှုများနှင့်တော့။ ကျနော်တို့ကဲ့သို့သောအကြောင်းစဉ်းစားခြင်းဂိမ်းအသိုင်းအဝိုင်းကြိုးစားအားထုတ်မှု၊စဉ်ကျနော်တို့လုပ်ဖို့ရှိသည်အားလုံးနီးပါးထိန်းချုပ်နေတာလေ၊မလျော့သောအချက်တစ်လျောက်ပတ်သောအမျိူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်မှုပေးထားနိုင်ပါတယ်လူတည်းဖြတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းနှင့်အောင်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်။ ကုန်တင်ဂုဏ်ယူဂိမ်းသို့ဟာရိုးရိုး၊ဒါကြောင့်သင်ကကြိုးစားချင်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုကိုယ်အဘို့၊သွားလက်ျာဘက်ရှေ့ဆက်!
တဦးတည်း၏အရေးအပါဆုံးအမှုအရာသည်ငါတို့အဘို့အသေချာဖို့လိုသူမည်သူမဆိုကစားအရှုပ်ရုပ်အမှန်တကယ်ပြုပါဒါကြောင့်။ ဒီဆိုလိုတာကကျွန်တော်တို့အခမဲ့သင်ပေးခြင်းအားဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီမံကိန်းနှင့်၊ကြောင်း၏ထိပ်တွင်၊ထိုစွမ်းရည်ကိုဒီဂိမ်းကိုကစားရန်ဖြောင့်မှ။ ကြည့်:အဘယ်သူမျှမလွန်းနှင့်အတူပျော်ရွှင်၏စိတ်ကူးကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲ။ဘယ်လောက်၊ဒါကြောင့်ကျနော်တို့အနေသေးကြောင်းထိုသို့ဖြစ်နိုင်ရန်ကောင်းတစ်စိတ်ကူးပဲလူေတြဝန်ဤညမ်းဂိမ်းအားဖြင့်မိမိတို့အ။ ဒါဟာဖြစ်ဘူးလိမ့်မယ်တစ်ဦးခက်ခဲတဲ့ဆေးကိုမျိုပထမဦးဆုံးမှာ၊ဒါပေမယ့်ရလဒ်များကိုမိမိတို့အဘို့စကားပြောဆို။, မှတပါး၊ဒီနည်းလမ်းကိုသုံးစွဲရန်ရည်ရွယ်ခဲ့ကြောင်းတကယ်အဆင်ပြေဖို့ငါတို့အဘို့ဆိပ်ကမ်းခေါင်းစဉ်သို့ကူးတဲ့မိုဘိုင်းဖော်ရွေ။ ကတည်းကပြေးရအားဖြင့်မြေခွေး၊ေပ၊Chrome သို့မဟုတ်အော်ပရာ၊အဖြစ်ကြာမြင့်စွာသင်သူတို့အားထည့်သွင်း၊သင်ပါလိမ့်မယ်၊အဖြစ်ဘေးကင်းလုံခြုံလက်၌ရှိသည်သုညကိစ္စရပ်များကိုလမ်းညွှန်ပတ်ပတ်လည်ဂိမ်းကစားခြင်းသည်အထိသင့်ရဲ့နှလုံးသည်–သို့မဟုတ်သင်၏ကြက်–အကြောင်းအရာ။ ဒီစကိုဆိုလိုတယ်သင်ကကစားနိုင်ပါတယ်ရှုပ်ရုပ်တြင္အချင်တယ်ဆိုရင်:ရွေးချယ်မှုကယ့်ကိုလုံးဝရင်းသင့်နှင့်အလတ်စား၏လက်လှမ်း!
ဒီအကယ့်ကိုကျွန်တော့်အစွန်အဖျားရေခဲတောင်များအတွက်အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ကမ်းလှမ်းမှုကိုဖို့ရှိသည်၊ပေါင်းရင်ရာလမ်းကိုသူတို့လက်ရှိကျွန်တော်တို့သွားဖို့စတင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ငိုက်ချောင်းသို့အချို့၏နောက်မျိုးဆက်တွေသင်ဘယ်နေရာမှာမဆိုမတှေ့လိမျ့မညျ။ ဒါဟာကြောက်စရာအတိုးတက်လာအောင်လုပ်ထားပါတယ်၊အထူးသဖြင့်ကြွလာသည့်အခါအပြည့်အဝပေါင်းစည်းလိင်မဟုတ်ဘဲ။ ရှုပ်ရုပ်သည်အစမျှသာပဲရှိသည်ဂုဏ်ပြုကြသည်သင်ဘုတ်အဖွဲ့တွင်နောက်ကျတာထက်။, ဒါကြောင့်၊သင်မည်သို့အကြောင်းရပ်တန့်ပတ်ပတ်လည်နှင့်ပတ်သက်ပြီးသင့်ရဲ့အချိန်ကိုဖြုန်း:တက်လက်မှတ်ထိုးရန်အရှုပ်အရုပ်နှင့်ယခုသင်သိလာပါလိမ့်မယ်ကျနော်တို့အဆင်သင့်ချိုး၏ဘယ်အရာ၏စိတ်ကူးကောင်းတစ်ဦးညစ်ညမ်းဂိမ်း!
ရှုပ်ရုပ်အခမဲ့ကစားရန်လိင်ဆပ်ကပ်ခေါင်းစဉ်ဝင်ရောက်နိုင်ကြောင်းတိုက်ရိုက်အားဖြင့်။ တက်လက်မှတ်ထိုးထက်လျော့နည်းအတွက် ၆၀ စက္ကန့်နှင့်ကစားစတင်။